साहित्य सरिता – Page 32 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ श्रावण २०७७, आईतवार ०६:०७ English
ढाँट्नै परे…. -सुधना अनुरागी १२ चैत्र २०६८, आईतवार २२:११
दोस्रो दर्जाको मान्छे -आन्विका गिरी १२ चैत्र २०६८, आईतवार २२:०७
रातको १० बजेको थियो, ऊ कोठामा पस्दा । यसअघि ऊ यति राती मेरो कोठामा कहिल्यै आएकी थिइन । अरू बेलाजस्तो सीधै कोठामा नछिरेर ऊ ढोकामा नै उभिइराखी । बाहिर चिसो थियो । उसले लामो खैरो कोट लगाएकी थिई । त्यही कोटको ठूलठूलो खल्तीमा उसले आफ्ना दुवै हात घुसारेकी थिई । मुख मफलरले छोपेकी थिई । सधैँझैँ..
आख्यान – कुमार नगरकोटी १२ चैत्र २०६८, आईतवार २२:०४
भुस्याहा आत्माहरूको कँही कतै कुनै चहलपहल थिएन । शिशिरको बफिर्लो प्रतिपदा-रात हृयाङ्गरमा झुण्डिएको पुरानो ओभरकोटझैँ शान्त मुद्रामा थियो । ११ : ४५ बजेको थियो शयन कक्षको भित्ते घडीमा । अनायास तपाईंको भावातीत-निद्रा भङ्ग, भङ्ग र भङ्ग भइदियो । लगभग दुई वटा अश्वैत घोडा अट्ने..
गोविन्द गिरी प्रेरणा, भर्जिनिया, अमेरिका १२ चैत । नेपाली भाषाका मूर्धन्य साहित्यकारहरु भीमनिधि तिवारी, सिद्धिचरण श्रेष्ठ तथा काशिवहादुर श्रेष्ठको जन्म शताब्दीको अवसरमा तिनले नेपाली वाडमयलाई पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै एक समारोहकावीच श्रद्धा अर्पण गरियो । विगत ६ वर्षदेखि..